Hadda, sidaan xogta ku helayo, waxaa la siin doonaa shaah iyo gunno yar marki ay ku jiraan xalin khilaaf. Inkastoo laga yaabo shaaha ku xiran qabashada shaqo inuu kordhiyo khilaafaadka jiro, maadaama ay suuragal tahay inay iyaguba abuuraan khilaaf si ay u xaliyaan ama mid jiray ay daba dheereeyaan, haddana waa bilow fiican.
Xarunta Xalinta Khilaafaadka, waxaa garab socday dhisidda maxkamadaha iyo yagleelidda waaxda caddaaladda oo aan horay gobalka ooga jirin. Wasiirka caddaaladda Jubaland Aadan Aw-xirsi oo ayaantaan suknaa Garbahaareey ayaa howshaas si wacan u dhaqaajiyay. Waxaa la shaqo galiyay shan qof oo kusoo baxday imtixaanaadki la qaaday.
Tallaabooyinkaan ayaa ah kuwo muhiim ah saamayn wanaagsanna ku yeelan doona gobalka. Waxay shaqo u abuurtay dhalin yaro aqoonyahanno ah. shaqaalaynta dhalinyada ayaa horseedi doonto inay dhalinti gobalka shaqo la'aanta ooga haajirtay dib ugu soo noqdaan, kuwa hadda joogana ay rajeeyaan inay shaqo heli doonaan.
Sidoo kale, waxay shaqo u abuurtay odayaashi dhaqanki ee camal la'aantu indho tirtay. Waxay noqoynaysaa marki ugu horraysay ee odayaal mushaar qaato Gedo kasoo toosaan, waa haddii laga dhabeeyo ballanqaadka.
Isku darkoodu wuxuu qayb weyn ka qaadan kobaca dhaqaalaha gobalka waxaana kordhi dakhliga shaqsiga iyo iibsiga alaabaha raaxada. Kobaca dhaqaalaha wuxuu abuuri nabad iyo xasillooni taasoo na gaarsiin doonto barwaaqo iyo baraare.
Imaanshaha wasiirka iyo shaqada uu ka qabtay Garbahaareeyba waa kuwo cusub horayna aan looga baran maamulka Jubaland. Muddoo badan ayay reer Gedo shakiba ka qabeen inay ka mid yihiin maamulka iyo inkale waayo maamulku uma dhaqmayn sidii inuu ka taliyo Gedo.
Maxaa keenay isbadlkaan?
Su'aalo badan ayaa la iska waydiinayaan sababta hadda gobala loo xasuustay. Dad badan ayaa rumaysan in culayska ka soo foodsaaray Axmed Islaan beeshisa oo doonayso inay kurisga ka tuuraan ay keentay inuu isku dayo inuu kasbado reer Gedo si uu garab ooga helo. Dad kale ayaa qabo, in khilaafka dhex qarxay wasiirada Jubaland ee Gedo kasoo jeedo uu abuuray tartarn dhexdooda ah. Dadkaan ayaa qabo, in halka Adam AW-Xirsi iyo Kaliil ay Garbahaareey ay wax la rabaan Cabdi janan uu Doolow wax la doonayo, tartankaasna uu abuuray faaiidadaan.
Qolo sadexdaad waxay leeyihiin, wax weyn ma jiraane waa hafaryo iyo af-dufan isu marin lagu doonayo in lagu galo doorashada soo dhawaatay ee Jubaland. Koox afaraad waxay ku doodayaan in arrintaan uu keenay Aw-xirsi oo hadda usoo jeestay la xisaabtan Jubaland doonayana inuu saxo khaladaadki hore.
Kay tahayba, anigu waxaan qabaa in tallabadaan horumar tahay Aw-xirsina ammaan ku leeyahay ujeedkuu rabo ha ka lahaadee. Waxaan kaloo qabaa inaysan nagu filnayn shaqada hadda la qabtay oo ah mid aan xaq u lahayn dagmooyinka kale iyo gobollada kalana ay nala wadaagaan.
Waxaa Gedo ka maqan maqaam iyo mansab. Sidaan mar hore sheegay, gobalku wuxuu ka kooban yahay sadex gobal. Mid wuxuu helay caamisimaddi (Bu'aale) midna wuxuu helay caasimadda ganacsiga (Kismaayo) midna lama soo hadal qaadin (Gedo) sidaa darteed waxaan qabaa in Gedo laga dhigo xarunta cilmiga oo laga furo jaamacadda gobalka ugu muhiimsan, maktabka ugu weyn iyo gaar ahaan kulyadda tababarrada macalimiinta Jubaland.
Ugu danbayn waxaa leeyahay, madaxda noo timid waa mahadsan yihiin, waana bogaadinaynaa shaqada ay noo qabteen balse wali cad aan leenahay ayaa naga maqan ee noosoo dhacsha.